Umhla My Pet » Yappily Kuze Emva: Ngaba Ndikulungele ukuba 'Intsapho approach'?
ngokuthi Ann Palik
Yappily Kuze Emva: Ngaba Ndikulungele ukuba 'Intsapho approach'?
Ukuba ubukhe baqalisa ndithandana pet lover amanye, sele unayo into ebalulekileyo eqhelekileyo: uthando lwakho izilwanyana. Izilwanyana nentsapho yakho. Mhlawumbi uyakubona wena nezilwanyana zakho iphakheji nesahlulo; Ukuba ngomhla wakho awukwazi ukufumana kunye nezilwanyana, lixesha ku khangela kwenye.
Ukuba nezilwanyana bakho basoloko kuza kuqala, njani na ukuhlanganisa ulwalamano olutsha uthando ebomini bakho? Ngaba umhla wakho wadibana nezilwanyana zakho? Njengabazali omnye, abanye abanini pet silinde ukubona indlela ubudlelwane ohamba phambi ukuzisa uthando umdla wabo ekhaya kumkhawulela “izilwanyana.” Ingaba ufana indlela umhla sakho esinxibelelana isilwanyana sakho? Ngaba umhlobo wakho entsha wenze umgudu ukuze ukwazi nesilwanyana yakho? Ndeva nje ngendoda parrot, waza wafuna indawo behaviorist intaka ukunceda intaka yakhe ukwamkela intombi yakhe entsha zabo “emfutshane.” Ixesha, umzamo, kwaye ndiyamthanda nentombi utyalo intaka wakhe wayengomnye izinto wakholelwa lo mfazi “eyona.” Kokuba sitshatile, nentaka yayichwayitile.
Ngaba umhla wakho ukuvana kakhulu kunye nezilwanyana, kodwa bakuphathe njengenja yokudlala ezikrazukileyo? Nangona Ndiyakholwa uthando izilwanyana luphawu ezilungileyo ubuchule ukuthanda ngokubanzi, amaxesha elinye iqabane bazive “yesibini iklasi” ukuba udlalisa zelinye. Kubalulekile ukuba kubekho ulungelelwano apha. Ndakha Ndazi umntu ndisela umsa nokuthantamisa kwaye ephatha deli eziphakamisa kwi inja yakhe, kodwa ngamazwi nangokwasemzimbeni kakubi intombi yakhe.
Ngaba wakha wacelwa ukuba ukhethe phakathi iqabane kunye isilwanyana? Impendulo kudla ukugcina pet, ubayeke iqabane aye. Yayiba, iqabane onothando madolw ukukunika mandikhethe enjalo. (Ukuba iqabane lakho nokwalisa eziqatha okanye uloyiko lwezifo-qabane lakho, le miba badla zisonjululwe uncedo lobungcali, xa omabini amaqabane bakulungele.) Ngokufuthi abantu bafuna ukhetha abantu bengakhuselekanga nokusilawula, kwaye akanako ukuma “ukwabelana” kuni isilwanyana. A zi ucinga iimvakalelo zakho; kuphela yabo. koko, kwanokuba ubuthe kuthi ndlela-ntle kwinja yakho, iqabane lakho ukuba uza yamkhweletela ezinye izinto: ixesha nabahlobo okanye intsapho, workouts yakho, azithandayo, nokuba mhlawumbi umsebenzi wakho. Ngoko ke lumka xa ubuzwa ukuba wenze ukhetho olunjalo.
Imibuzo malunga ezimbini Wenu:
– Ingaba yanele ekugcineni ubudlelwane bucala uthando lwakho Mutual zezilwanyana?
– Zenza zakho njani kunye nabanye? Ngaba omnye kuni iikati, ezinye iintaka? Ngaba ukusombulula ezinobungozi izilwanyana ebonakala ezingahambelaniyo?
– Yenza ababini kuni ezahlukene iimbono malunga nezilwanyana zakho’ yokuphila? Umzekelo, Uvakalelwa ikati yakhe kufuneka sihlale ezindlwini ndilale naye ebhedini, kodwa yena ukholelwa ngamandla ukuba iikati lilungu ngaphandle? Ukuba ithe intaka kwaye unyanzelisa ukuba ufumane Veggies eziphilayo ngokupheleleyo-spectrum izibane, ngaba ingqalelo oku inkunkuma overindulgent imali? Ukuba xa uqhuba thabatha inja bakhe kunye naye, ngaba endingayithandiyo inja awunamoya endlebeni?
– Hlala phantsi uze uthethe omnye nomnye izinto ezikuxhalabisayo. Ukuze bazive yingozi, kodwa kungcono ukwenza oku msinyane kunokuba kamva, kwaye uya kufumanisa ebalulekileyo umhla yakho ngexesha lengxoxo: indlela okanye uhlangabezana njani na izifundo ezinokuba sticky. Ukwazi ukulungisa iindawana zongquzulwano lwezimvo luphawu ezilungileyo ulwalamano luhleli.
Ukuba zombini abathandi pet, ube sele Ukubaqalisa kakuhle. Ze luhlale luluhle unxibelelwano kwaye uthabathe ixesha masiziyolise (kwaye ngaphandle nezilwanyana zakho). Thatha ixesha ukuhamba Kufike, zijoje amavumba, nentlaka, i-Meow, ziyafi-, kwaye ukukrikriza ezintliziyweni zenu’ umxholo!
7 Iinkolelo Ngesondo